नेपाल उत्तर र दक्षिणको परेड मैदान भयो : डा. रामवरण यादव «
नेपाल उत्तर र दक्षिणको परेड मैदान भयो : डा. रामवरण यादव
प्रकाशित मिति : 31 December, 2020 3:55 pm
पूर्वराष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले नेपाल क्षेत्रीय राजनीतिको मैदान बनेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । ४५औँ राष्ट्रिय मेलमिलाप दिवका अवसरमा तेजतीर्थ प्रतिष्ठानले शान्ति वाटिकामा आयोजना गरेको कार्यक्रममा डा. यादवले उत्तर र दक्षिणको परेड नेपालमा चलिरहेको बताएका हुन् ।
“उत्तर र दक्षिणको जुन परेड यहाँ भइरहेको छ, त्यसले अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिको ध्यान थप आकर्षित गर्दैछ,” डा. यादवले भने, “हाम्रो राष्ट्रका लागि यो सुखद् हुँदैन ।”यादवले यस्तो अवस्थामा देशका लोकतान्त्रिक संस्थाहरुले आफ्ना–आफ्ना कर्तव्य निर्वाह गरेन भने राष्ट्र जोखिममा पर्ने चेतावनी दिए ।
उनले बीपीले मेलमिलाप नीति सुरु गरेको आज ४४ वर्ष भएको भन्दै पछिल्ला दिनमा त्यसको महत्व अझ बढिरहेको र दलहरु अझ अव्यवस्थित भइरहेको बताए । ०७ साल, ०४६ साल र ०६२ को जनआन्दोलनपछि लोकतन्त्रमाथि आक्रमण गरिरहने संस्थालाई फालेर पनि मुलुकमा सुधार आउन नसकेकोमा उनको असन्तुष्टि थियो ।
“लोकतन्त्रमाथि आक्रमण गरिरहने संस्था हटाएपछि नयाँ व्यवस्थाको प्रतिनिधित्व गर्न म तपाइँ सबैको आर्शीवादले पुगेका थिए । अहिले नागरिक भएर हेर्दा धेरै चिन्ता लागिरहेको छ ।
छटपटी हुने गरेको छ,” डा. यादवले भने, “जुन राष्ट्रले मलाई त्यत्रो ठूलो सम्मान र जिम्मेवारी दियो, दुईओटा संविधानसभाको निर्वाचन गरेर बडो सकसपूर्णरुपमा जनताको सामुन्ने संविधान जारी गर्ने सौभाग्य मैले पाएको थिएँ, म तपाइँहरुलाई फेरि एकपटक सम्झाउन चाहन्छु कि त्यो प्रतिनिधिसभा, लोकतन्त्र, संविधान र हामीले संघर्षबाट ल्याएको व्यवस्था र यसका संरचना यी सबैलाई ट्रयाकमा राख्न नेपाली जनताको काँधमा जिम्मेवारी आएको छ ।
खासगरी राजनीतिक दलहरु, त्यसमा पनि लोकतन्त्रको हिमायती गौरवपूर्ण इतिहास भएको नेपाली कांग्रेसको काँधमा जिम्मेवारी आएको छ । सानातिना फाइदाका लागि केही काम गर्नु हुँदैन ।’’
यस्तो छ डा. यादवको मेलमिलाप दिवसको मन्तव्य
बीपी कोइराला र गणेशमान सिंह आफूलाई फाँसकिो सजाय हुन सक्ने जान्दा–जान्दै राष्ट्रियता र लोकतन्त्रको रक्षाका लागि स्वदेश फर्कनुभएको दिन हो । आजको दिनमा शान्ति वाटिकामा प्रवेश गरेर सहिदलाई फूल चढाएपछि केही कुरा बोल्नु राष्ट्रहितमा हुनेछ भन्ने मैले आफ्नो कर्तव्य ठानेको छु ।
१७ सालको घटना हुँदा म ८ कक्षमा थिए । ०४६ साल हुँदै ०६२/६३ को दोस्रो जनआन्दोलनसम्म सबै घटना, परिघटना मेरो सामुन्ने छन् । यी सबैको घटनाको गवाह म आफैँ छु ।
अहिले जुन परिस्थिति देशमा छ, त्यसअनुसार बीपीको मेलमिलाप नीति अझ सान्दर्भिक भएर आएको छ । त्यसबेला बीपी कोइराला किन राष्ट्रिय मेलमिलाप नीति लिएर फर्कनुभयो, विद्वानहरुका सामु मैले दोहोर्‍याइरहनुपर्छ भन्ने लाग्दैन । तपाइँहरु अहिलेका राष्ट्रिय परिस्थिति नजिकबाट हेरिरहनुभएको छ । राष्ट्रमा खतरा बढिरहेको छ । बीपी कोइराला यस्तै अवस्था भएका कारण त्यसबेला फर्कनुभएको थियो ।
नेपाली कांग्रेसको इतिहास त गौरवशाली छ । तर, कांग्रेसले आफ्नो पार्टीभित्र व्यवस्थापन गर्न सकिरहेको छैन । पत्रपत्रिकामा पढ्दाखेरी र टेलिभिजनको पर्दामा हेर्दाखेरी अपोजिसनको भूमिका कमजोर देखियो जबसम्म सदन थियो, त्यसबेलादेखि नै प्रश्न उठ्दै आएको थियो प्रतिपक्षमाथि । कम्युनिष्ट पार्टीको अवस्था तपाइँहरुसामु छ, उसको इतिहास पनि तपाइँहरु सामु नै छ । लोकतन्त्रमा अरु पार्टीहरु पनि छन् ।
राजनीतिक पार्टीहरु लोकतन्त्रका पिलर हुन् । पार्टीहरु आफ्नो संगठन र स्वतन्त्रतापूर्वक जनताको समस्या समाधान गर्दै अघि बढ्छन् । तर आज पार्टीहरु विभाजित हुँदैछन् । अवस्था सन्तोषजनक छैन । आशा गरौ, यो दिनमा कमसेकम नेपाली कांग्रेस (यहाँ बहुसंख्यक कांग्रेस भएकाले भन्दैछु) आफूलाई व्यवस्थापन गर्दे आफ्नो इतिहासको रक्षागर्न र लोकतन्त्रको रक्षाका लागि उभिने छ ।
अहिलेको परिस्थिति जुन छ, लोकतन्त्र, सांविधानवाद, राष्ट्रिष्यता सबैमाथि दुरगामी प्रभाव पार्ने काम भइरहेको छ र अनिश्चित बाटोमा देश गइरहेको छ । यसको टुंगो कसरी लाग्ने ? निश्चय नै प्रतिनिधिसभा कार्यकारीबाट असंवैधानिक ढंगबाट भंग भयो । कसरी संवैधानिक बाटोमा ल्याउने यसमा राजनीतिक दल, नागरिक समाज र पत्रकारको भूमिका छ । यो विषय अदालतमा पुगेको छ । यो कुराको परीक्षण अदालतले गर्दै छ । कुनैपनि कुरा विधिसम्मत छ कि छैन भनेर परीक्षण गर्न सबैको विश्वास र भरोसा भएको अदालत नैहो । मेरो पनि भरोसा त्यहीबाट न्याय हुन्छ भन्ने आशा छ । अदालताबाट प्रजातन्त्र, संविधान, यो व्यवस्था र राष्ट्रियताका लागि फलदायी ‘भर्डिक्ट’ आउने छ भन्ने आशा गरौ ।
विपी र गणेशमा जुनवेला आउनुभयो, त्यस वेलाको परिस्थिति क्षेत्री र हाम्रोृ राष्छि«य राजनीति सहि थिएन। उहाँहरु राष्ट्रियतालाई कसरी जोगाउने, लोकतन्त्रको गाडीलाई कसरी अघि बढाउने भनेर मेलमिलापको नीति लिएर उहाँहरु नेपाल फर्कनुभएको थियो ।
मेरो विचारमा क्षेत्रीय राजनीति अहिले त्यो भन्दा झन जटिल भएर आएको छ । हाम्रो भूराजनीति सामरिक अवस्थालाई चिन्तन नगरेर स्वस्थ एउटा विदेश नीति नल्याइकन हामीले हाम्रो राष्ट्रको जगेर्ना गर्न गाह्रो हुन्छ । अहिले सिर्फ क्षेत्रीय मात्र हैन अन्तराष्ट्रिय राजनीतिको पनि अन्तराष्ट्रिय शक्ति राष्ट्रको ध्यान पनि तानिएको छ । त्यसको कारण छ कि हामी दुइवटा ठूलो देशको बीचमा अवस्थित छौ । दुईवटा ठूला देश अहिले आमने सामने खडा छन्, उनीहरुको तानातान चलिरहेको छ । त्यो हामीले पढिरहेका छौ बुझिरहेका छौं ।
उत्तर र दक्षिणको जुन यहाँ परेड भइरहेको छ, त्यसले अन्तराष्ट्रिय राजनीतिको ध्यान थप आकर्षित गर्दैछ । हाम्रो राष्ट्रका लागि त्यो शुुःखद हुँदैन । यो अवस्थामा मैले तपाईले र यो देशका लोकतान्त्रिक संस्थाहरुले यो आफ्ना–आफ्ना कर्तव्य निर्वाह गरेन भने हामीले राष्ट्रको भलो गर्न सक्दैनौ । विपीले मेलमिलाप नीति सुरु गरेको आज ४४ वर्ष भएको छ । तर, पछिल्ला दिनहरुलाई हेर्दा यहाँको राजनीतिक दल र नेतृत्व, तेत्रो ठुला क्रान्तिहरु ००७ साल ०४६ साल र ०६२÷६३ को आन्दोलन पछि लोकतन्त्रमाथि आक्रमण गरिरहने संस्थालाई फालेर नयाँ व्यवस्था सुरु भयो ।
नयाँ व्यवस्थाको प्रतिनिधित्व गर्न म तपाई सबैको आर्शिवादले जिम्मेवारीमा पुगेको थिए । अहिले नागरिक भएर राष्ट्रमने अवस्था हेर्दा धेरै चिन्ता लागि रहेको छ, छटपटी बढिरहेको छ । जुन राष्ट्रले मलाई त्यो सम्मान र जिम्मेवारी दियो र मेरो हातबाट संविधान जारी भएको थियो । दुई वटा संविधानसभाको निर्वाचन गरेर बडो सकसपूर्ण रुपमा जनताको समुन्ने संविधान जारी गर्ने सौभाग्य प्राप्त भएको थियो । त्यसलाई अघि बढाउने कुरामा आज केही समस्या देखिदैछन् । मतपाईहरुलाई फेरि एकपटक सम्झाउन चाहन्छु कि त्यो प्रतिनिधिसभा, संविधान, हामीले संघर्षबाट ल्याएको व्यवस्था र यसका संरचना यी सबैलाई ट्रयाकमा राख्न सझग भएर आ–आफने भूमिका खेल्न नेपाली जनताको काँधमा जिम्मेवारी आएको छ ।
खासगरी राजनीतिक दलहरु, त्यसमा पनि लोकतन्त्रको हिमायति गौरवपूर्ण इतिहास भएको नेपाली कांग्रेसले सानातिना फाइदाका लागि केही काम गर्नु हुँदैन । व्यक्ति भन्दा राष्ट्र ठूलो हुन्छ । लोकतन्त्रको विधि मार्फत हामीले यी सबैकुरा प्राप्त गरेका हौ । प्रतिनिधिसभामा तीन करोड जनताको प्रतिनिधित्व हुन्छ, संविधानुसभामा त ६०१ जना प्रतिनिधि सबै समुदाय, सबै कुनाकाप्चाका प्रतिनिधि थियौ । केही कुरन समाधान नभएपनि ती पछिल्लो समय समाधान हुँदै अघि बढिरहेको थिए, निराकारण हुने प्रक्रियामा थिए । यो संविधानलाई नयाँ चुनाव गराएर ५ वर्ष स्थिरताको अभ्यास हँुनै लाग्दा त्यसको विपरित आज त्यो संस्थालाई विदा गरेर लोकतन्त्रलाई आघात पारिएको छ । संविधानका व्यवस्थाहरु प्रयोग हुन पाएकै छैनन् ।
कार्यकारिणीले राष्ट्रिय हित र राष्ट्रियताको दुरगामी प्रभावलाई पनि नविचार गरेर जुन बाटोमा हिडउन खोज्दैछ यसमा हामी सबैको कर्तव्य छ, कि यसलाई सझगतापूर्वक नियालौ तवमात्र राष्ट्रिय मेलमिलापको सान्दर्भिकता हुन्छ । राष्ट्रिय शक्ति मिले भने सबै कुराको निदान हुन सक्छ । तर, राष्ट्रिय शक्तिहरु अहिले जस्तौ बाडिए भने लोकतन्त्रको गाडीले बाटो छोडेको छ, त्यसलाई राजमार्गमा ल्याउन सकिँदैन ।